बंगलादेश बिरुद्द पवन सराफको सानदार अर्धसतक, कुशल मल्लको आक्रामक इनिंग ! || सुनौलो नेपाल
बंगलादेश बिरुद्द पवन सराफको सानदार अर्धसतक, कुशल मल्लको आक्रामक इनिंग !
भदौ २२ काठमाडौं लंकामा जारी एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाली ओपनर पवन सराफले अर्धसतक पुरा गरेका छन् । उनले ८० बल खेल्दै आफ्नो अर्धसतक पुरा गरेका हुन् । यो संगै पवन सराफको अर्धसतकको मदतले नेपालले ३ विकेटको क्षतिमा १५० पनि पुरा गरेको छ। १५० रनको आंकडा पुरा गर्ने क्रममा कुशल मल्लले पनि आक्रामक पारी खेले उनले आउट हुनु पूर्व ३३ बल खेल्दै २८ रन जोड्दा ३ छक्का र १ चौका हिर्काएका थिए । चालु अबस्थामा नेपाल १५० रन बनाउदा ३ विकेट गुमेको छ भने ३५ ओभर खेल सकिएको छ । क्रिजमा पवन सराफ ६८ रन र कप्तान रोहित पौडेल ११ रन बनाएर खेलेका छन्
बंगलादेशले टस जितेर नेपाललाई पहिला ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो। पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग ५ किवेटले पराजित भएको नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न बंगलादेशलाई जित्नै पर्ने दबाब छ।
पहिलो खेलको प्रर्दशन अनुसार नेपालले बंगलादेशविरुद्ध आफ्नो प्लेइङ ११ मा केहि फेरबदल गर्न सक्छ । उत्कृष्ट लयमा रहेका खडक बोहराले मौका पाउन सक्ने संभावना प्रबल छ । उता बंगलादेशले पहिलो खेलमा यूएईलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको थियो । बंगलादेशको टोलीमा गत वर्ष यू१९ विश्वकपमा शतक प्रहार गर्ने तौहीद हृदोय देखी बंगलादेश प्रिमियर लिग खेलि सकेका खेलाडी छन् ।